Linus torvalds inokurukurwa naDave Chinner kumhanya kweiyo kernel caching system | Linux Vakapindwa muropa
Linus torvalds inokurukurwa naDave Chinner nezve kumhanya kweiyo kernel caching system
Mukomputa, cache ndangariro inochengeta kwenguva pfupi makopi e data kudzikisa yekuzowana nguva yekuwana. Caching inogona kunyatsoshandisa zvakare yakambotorerwa kana kugadziriswa data.
MuLinux, iyo caching system inonyanya kunzi "peji cache", asi Kutungamira I / O kuendesa kunogona zvakare kushandiswa. Mukuita, cached data inowanzo kuchengetwa pane inokurumidza-kuwana Hardware, senge RAM, uye inogona zvakare kushandiswa pamwe chete nechinhu che software.
Kazhinji, iyo Linux kernel inoreva "cache peji" kana uchiverenga kana kunyora ku disk. Mapeji matsva akawedzerwa kupindura kuverenga zvikumbiro kubva kune mushandisi-modhi maitiro.
Kana iyo peji racho risati rave mune cache, new entry inowedzerwa kune cache uye inozadziswa ne data rakaverengwa kubva ku disc. Kana chiyeuchidzo chakakwana chiripo, peji racho rakavharirwa kwenguva isingaperi uye rinogona kushandiswazve nemamwe maitiro pasina kuwana diski.
ari Linux kernel vagadziri vakashandisa iyo "cache peji" kuzadzisa zviviri zvakakosha zvido.
Kutanga, iyo inobvumidza iyo sisitimu kuti ikurumidze kutsvaga peji rakatarwa rine dhata pamusoro pemumwe muridzi. Kuti utore mukana weLinux cache, iyo yekutsvaga inofanira kunge iri yekukurumidza kushanda.
Chechipiri, mirayiridzo isingawanzo inobata peji cache uye kuverenga kuverenga-kumberi kunononoka kuverenga nekunyora mafoni.
Nezvikonzero izvi, Linux inopa nzira yakapusa yekupfuura cache mapeji: kunanga I / O kuendesa.
Torvalds anoudza Dave Chinner kuti maonero ake ndeangu chete ...
Mune yakananga I / O kuendesa, iyo kernel inoronga iyo diski inodzora kuendesa dhata yakanangana nemapeji ari mushandisi-modhi kero nzvimbo ye otomatiki caching application
Nyaya yacho yagara ichikurukurwa munharaunda yeLinux uye yave iri nyaya yemakakatanwa pakati peLinus Torvalds neLinux kernel mupi.
Zvechokwadi, mune posvo kubva kuLinux kernel tsamba yekutumira, Dave Chinner, weAustralia programmer uyo anotungamira iyo XFS faira sisitimu yakagadzirwa neSilicon Graphics (SGI) uye inotsigirwa nezvakawanda zvekuparadzirwa kweLinux, yakati peji cache ichiri kunonoka zvakanyanya kupfuura kuendesa I / O kuendesa.
"Pamushandirapamwe unokwikwidza unoita data rakakura mumafaira makuru akachengetwa mune yekumhanyisa-kuchengetedza, peji cache ichiri kunonoka zvakanyanya kupfuura kuendesa kwakananga I / O," akanyora mumushumo wake. meseji.
Chirevo chako chinowirirana neicho chataurwa pamusoro apa, kuti mune dzimwe nguva, senge dhatabhesi, uko huwandu hwe data irikuchengetwa hwakanyanya, zvingave nani kushandisa workaround: kunongedza I / O kuendesa.
Izvo zvakati, Linus Torvalds, haana kukoshesa kutaura kwemubatsiri wake pachinhu che data caching mune yake yekushandisa system. Wekupedzisira akadaidza mazwi aDave Chinner "shit" asati amurwisa mune refu meseji. "Iwe watoita chikumbiro ichi, uye yanga yatove shit yakakwana, uye ndazokufonera nezvazvo futi," akamuudza.
Akacherekedza kuti iro rakakosha mu "peji cache" iri "cache" uye kuti rinoshanda kwazvo. Iwo ma caches anoshanda, Dave. Chero ani anofunga kuti cache haashande haagone. Inenge 99% yeese mapindiro kune iyo faira sisitimu yakachengetwa, uye haamboitise yakananga I / O kuendesa.
Iyo peji cache inovabata zvakakwana. Paunotaura kuti peji cache inononoka kupfuura kuendesa I / O kuchinjisa, imhaka yekuti hautomboona kana hanya nekukurumidza kwekushanda. "Izvi zvinonzwisisika sezvo zvichingoitika kana ruzivo rwekuita rwaitwa," anodaro Linus Torvalds pane tsamba yekutumira.
Kwake, chero munhu anopokana nepfungwa iyi haazive zvachose uye Dave Chinner ndomumwe wavo.
«Unoita chirevo ichi usinga fungisisa zviitiko zvese zvausingawone uye zvisingakufarire nekuti peji re cache rakatovabata kare. Izvo zvirinani zvirinani pane kuendesa chaiko I / O kuendesa. Kangani iwe unoshandisa zvisiri-zvenguva zvitoro paunenge uchironga pasina IO? Zvinenge zvisati zvamboitika, pamwe? Nekuti mapakeji anoshanda. "Saka mira nenharo dzako dzeupenzi uye dzekusatendeseka, kwaunofuratira mhedzisiro yekuchengetwa," Torvalds akaenderera
Kumwe kune yako meseji Dave Chinner akatsanangura kuti peji cache miganhu iri kuramba ichinyatso kuoneka sezvo maSSD anova anoshanda zvakanyanya.. Chinhu chimwe Torvalds achiri kusawirirana nacho.
"Uye kwete, maSDD haana kuita kuti macache asashande," akadaro. Zvisinei, mukupindura chinyorwa chakareba chaTorvalds, Chinner akatsanangura kuti anoramba achigutsikana kuti dambudziko raari kuratidza nderechokwadi. Kuna Chinner, ichokwadi kuti kune akawanda macustoms apo peji cache rinoshanda, sezvo richigara richikurumidza kupfuura mazhinji masisitimu ekuchengetedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linus torvalds inokurukurwa naDave Chinner nezve kumhanya kweiyo kernel caching system
Akanyora "bullshit" chaiyo nzombe shit uye nenzira yekufananidzira akataura kuFALACIAS nharo dzekuti kune inonakidza nhau kurira zvakanyanya uye kutaura kuna baba ve kernel "Linux haisi unix" asi akavadya ese achizvidza, kutanga iwe unofanirwa kuziva, kunyangwe mitauro. Nenzira iyo FALLACIOUS, inonyengera muChirungu, iripo asi haiwanzoshandiswa kunze kwemitauro yakanyanyisa kana yechikoro
Ini ndinofunga kuti Linus inoitika senge yeiyo VOX, ivo vakarurama mune zvavanotaura, asi vanorasika nzira dzavo.
Kune maTolvars ini ndinoona kuti mazororo anga asingamubatsire zvishoma, haaratidzike kunge akasununguka nevabatsiri.
Kana zviri izvo zvaanotaura nezve VOX, havarasikirwe nemafomu chero nguva, izvo zvinongova nhema, avo vanomushoropodza vasingazive kwekuenda vanorasa mafomu.
iko kushandurwa kwechinyakare
Pindura kune dfsdf